SAWIRRO: Banaanbaxyo maanta gil gilay magaalooyinka Garowe & Dhuusa-mareeb – War La Helaa Talo La Helaa
SAWIRRO: Banaanbaxyo maanta gil gilay magaalooyinka Garowe & Dhuusa-mareeb
By Xuseen Madoobe	 Last updated Apr 16, 2019
Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa waxaa Maanta banaanbax ka dhigay Gaadiidleyda ku nool Magaladaas kuwaas oo ka cabanaya qiimo koror lagu sameeyey Aqoonsiyada Gaadiidka.
Darawalada Gaadiidka sida, kuwa nooca raaxada iyo Mooto Bajaajta ayaa waxaa ay isugu soo baxeen Garoonka Kubadda Cagta Dhuusamareeb, iyaga oo maamulka ka dalbaday in ay ka fiirsadaan qorshahaas inta aan la hirgelin.
Darawalada ayaa shaki waxa ay geliyeen halka uu ka Shaqeyn doono Taargada iyo leysinka Gaadiidka, iyada oo xilligaan uu jiro khilafka siyaasadeed ee Hoggaanka Galmudug , kaas oo kala xir xiray isku socodka Magaalooyinka qaar.
Dhinaca kale waxaa Maanta banaanbax uu ka dhacay Magalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugal,waxaana banaanbaxaas uu ahaa mid looga soo horjeedo falalka kufsiga ah ee kusoo batay deegaanada Puntland.
Boqolaal ka mid ah dadka ku nool Garoowe oo u badan haween ayaa banaanbaxa dhigay,waxaana ay ka dalbadeen Golaha xukuumadda Puntland in cadaaladda la horkeeno dadka loo heysto falalka kufsiga la xiriira.
Akhriso: Magacyada Guddoomiyeyaasha cusub ee degmooyinka Gobolka Banaadir
K/Suudaan oo Garoonkeeda ka hor istaagtay iney ka dhoofto Xaaska madaxweynihii hore ee Suudaan